Kooxda Damjadiid oo boobtay xilalkii dowladda! akhri Wasiirada cusub iyo taliyayasha | Somali - Diaspora
Kooxda Damjadiid oo boobtay xilalkii dowladda! akhri Wasiirada cusub iyo taliyayasha
22 October 2012 – Damjadiid ee awooda balaaran ku leh howl socodsiinta dowladda cusub ee uu Madaxweynaha ka yahay, Xasan Sh. Maxamuud Calasoow, ayaa waxa ay baryahaan ku mashquulsanayeen sidii ay u xadidi lahayeen boosaska ugu badan ee ay ku yeelan doonaan dhismaha hogaanka dalka ee cusub.
Damjadiid oo markii hore cabsi ka qabay in ay dad badan soo galiyaan xubnaha xukuumadda iyo jagooyin kale ayaa waxaa ay ka faa’iideysteen balan qaad uu siiyey madaxweynuhu ka dib markii uu isagu keensadey Raysal wasaraha cusub Cabdi-Saacid faraax-garaad shirdoon oo ayna ayagu rabin. Dadkaan ay jagooyinka u qaybiyeen ayaa waxa ay intooda badan ka ahaayeen xubno fir fircoon kooxdan dam jadiid, iyadoo ay ku jiraan dhowr qof oo kale .
1- R/Wasaare ku xigeen, Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska: Ridwaan Xirsi Maxamed (Isaaqa, garxajis, Habar yoonis).
2- R/wasaare ku xigeen, Wasiirka Maaliyadda iyo Lacagta: Siciid C/laahi Maxamed (Siciid Danni), (Daarood, majeerteen, Cismaan Maxamuud).
3- Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga qaranka: C/kariin Xuseen Guuleed ( Hawiye, Habargidir sacad)
4- Wasiirka Cadaaladda, awqaafta iyo arimaha diinta: Maxamed Nuur Gacal (Hawiye Murusade, Cabdalle).
5- Wasiirka qorshaynta iyo xiriirka Caalamiga: Jamaal Maxamed Baaroow ( beesha shanaad, jareerweyne) Jamaal ma aha xubin ka tirsan damjadiid laakiin waa aqoonyahan ka mid noqdey Xisbigii PDP ee madaxweynuhu madaxda ka ahaa.
6- Wasiirka Waxbarashada , hidaha iyo Tacliinta sare: Faarax Sh. C/qaadir Muxumed (beesha shanaad, reer awxasan)
7- Wasiiru dowlaha Gaashaan dhigga: Cabdi Axmed Abtidoon( Hawiye, habar gidir, saleebaan).
8- Wasiirka Beeraha: Aweys C/laahi Ibraahin (Aweys Qarni) (Digil iyo Mirifle, raxanweyn, Xariin).
9- Wasiiru dowlaha qorshaynta iyo xiriirka caalamiga : Cumar Idiriis (Cumar dheere), (Hawiye, gugun dhabe, jajeelo).
10- Wasiir ku xigeenka Warfaafinta : Maxamed Amiin Maxamed Al haadi ( beesha shanaad, reer baraawe, xaatimi)
11- Wasiir ku xigeenka Ganacsiga Dr. Xamdi Cabdi Aar( Daarood, ogaadeen, reer C/lle).
Jagooyinka kale ee ay qaateen ama ay u dhiibeen dad ay wataan
1- Gudoomiya Gobolka Banaadir: Xasan Maxamed Xuseen (Muun Gaab) (Abgaal, Wac buudhan, Celi), ninkan madaxweynaha ayaa diidan inuu jagadaan qabto oo laga soo badalo midda uu hadda hayo maxkamadda ciidamada.
2- Agaasimaha Xarunta Madaxtooyada: Dr. Maxamed Sh. Cali doodoshe) (mareexaan, Cali dheere)
3- Taliyaha Ciidamada Xoogga: Jen. Cali ismaaciil Maxamed (Majeerteen, Cali salebaan).
4- Safiirka Dowladda Qadar u fadhiya Soomaaliya: Fahad Muxumed Yaasiin, (Beesha Shanaad, reer awxasan), Faarax C/qaadir ayey jufo hoose yihiin, waana ninka mid ka mid ah amiira Qatar ka soo qaadey lacagtii lagu laaluushay xildhibanada xiligii doorashada.
5- Taliyaha nabad sugida gobolka Banaadir: C/xakiin Fareey (Murusade)
6- Agaasimaha Guud ee wasaarada warfaafinta: Axmed farax Cali (Idaajaa), (Mareexaan, reer diini, reer Siyaad),lama oga inuu idaajaa aqbalay xilkan iyo in kale laakiin waxaa u ololeynaya fahad yaasiin oo ay saaxiib yihiin.
Somaliland: gross corruption and maladministration of higher education Baaq Muhiim ah ka soo baxay kulankii Jaaliyadda Beesha Sheekhaal ku yeesheen Magaalada Johannesburg